Shaqada Xummada Saldhigga Cusub ee Baska Ordu | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 52Shaqo Ka Feexsan Saldhigga Cusub ee Baska Ordu
30 / 04 / 2020 Ciidamada 52, GUUD, Gobolka Banaadir, WADADA, TURKEY
shaqo xumad ka haysa saldhiga cusub ee ciidanka
Degmada Ordu Metropolitan Karşıyaka Waxay ku qabataa shaqo qandho waddo 2,5 km ah oo loo yaqaan boosteejada baska cusub iyo wadada Eskipazar TOKI ee Mahallesi Çiftlik Caddesi.
Iyada oo shaqada la qabanayo Karşıyaka Wadada 'likiftlik Street', oo kutaala inta udhaxeysa Buundada Difaaca Madaniga ah ee Degmada iyo Buundada Eskipazar ee TOKİ, waxaa loo keenayaa haro kulul iyo baaskiil iyo wado lugeynaya ayaa la siin doonaa dhinaca wadada Stream Civil ee wadada.
2,5 KM LENGTH iyo 9 METER WIDTH
Coşkun Alp, Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose ee Magaalada Ordu, oo baaray shaqooyinka goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay qaadeen talaabo ay ugu diyaar garoobayaan wadada kahor inta aan shaqada la dhameystirin xarunta cusub ee basaska. Xoghayaha Guud Alp wuxuu yidhi, “Waxaan bilownay shaqada lagama maarmaanka u ah dariiqa iyadoo la raacayo tilmaamaha Wasiirkayaga ka hor inta aan la dhisin boosteejada baska. Dhismaha xarunta basaska ayaa la soo gabagabeyn doonaa. Hawlaha wadadu waa la dhammayn doonaa ka hor intaadan dhammaysan. Wadadan, oo dhererkeedu yahay 2,5 km, ballaadhkeeduna yahay 9 mitir, waxay noqon doontaa meel kulul. Waxaan sidoo kale sameyn doonnaa wado baaskiil oo gobolka loo maro. Wadadani waxay noqon doontaa wado kale oo raaxo leh oo gaadiid loogu tago Ulubey. Waxaan sii wadaynaa shaqadeena anaga oo aanan gaabin. ”
“HALKAANU WAA NINKII dhiigyacab”
Shaqada laga qabtay Eskipazar Neighborhood Headman İlhan Karaağaç, Madaxweynaha Dr. Waxaan u mahadcelinayaa Mehmet Hilmi Güler iyo kooxdiisa, “Wadadani, oo sidoo kale gaadiid ku siisa TOKİ oo leh 5 kun oo guryo ah, ayaa ahayd boogteenna dhiig-baxa. Ilaahay ha barakeeyo Duqa Magaalada iyo kooxdiisa. Adeegyada ayaa loo fuliyaa iyada oo aan la joojin, ”ayuu yidhi.
WUXUU DIYAARINAYAA DIIWAAN GALINTA
Marka la dhammaystiro shaqooyinka, masaafada u dhow saldhigga cusub ee basaska, TOKİ, Eskipazar iyo nawaaxigeeda ayaa hoos u dhici doona, waajibka saaran gaadiidleyda inay galaan jidka weyn ee Ulubey kana leexdaan jihooyinka fog ee waddadan way baabi'i doonaan.
Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu sii wadaa Shaqada Faransiiska ah
Shaqada Nadaafadda ee Nidaamka Tareenka ee Kayseri
Qandhada Shaqada ee Aksaray Junction
Shaqada Xumaynta Wadooyinka Xaafadaha ee Konya
Magaalada Bursa, wadooyinka aan sanadaha loo hayn dayactir dartiis taraafikada taraafikada ayaa gaadhay raaxo mahadsanid bandoowyada. 28 kiiloomitir oo dariiqa illaa iyo hadda ah oo keliya daraasadihii lagu soo rogay bandoow, [More ...]
Baaskiilada fudud ee Ordu waxaa lagu magacaabo Magandas